Shaybaadhaka Hubinta tayada Biyaha Hargeysa oo Baadhis ka bilaabay Ceelasha Biyaha ee Aw Barkhadle – WARSOOR
Shaybaadhaka Hubinta tayada Biyaha Hargeysa oo Baadhis ka bilaabay Ceelasha Biyaha ee Aw Barkhadle
HARGEYSA – (WARSOOR) – Xafiiska shaybaadhaka Hubinta tayada Biyaha Hargeysa ayaa shaqadisii ugu horaysay ka bilaabay Ceelashada Biyaha deegaanka Aw-Barkhadle ee ay Booyadahuhu kasoo dhaamiyaan.
Xubno kamid ah Xafiiska shaybaadhaka Hubinta tayada Biyaha oo katirsan Wakaaladda Biyaha Hargeysa ayaa sheegay inay goobta Ceelasha Aw-Barkhadle ee biyaha looga dhaamiyo Hargeysa ay inay ka bilaabeen Hubinta tayada biyaha halkaasi laga soo qaaddo taas oo ay ka cabbaan dadweynuhu.
Masuuliyiinta shaybaadhaka Hubinta tayada Biyaha ee Hargeysa ayaa sheegay in ceelasha Biyaha ay ka baadhi doonaan Fayadhowrkooda iyo waxkasta oo halis caafimaad ku keeni kara bulshada looga soo dhaamiyo Biyaha Haday tahay Waxyaabaha Ili-ma-aragtayda ah iyo waxyaabaha Kiimikaalka ah ee ceelasha kasoo raaci kara.
Xubno kamid ah Booyadlayaasha biyaha u dhaamiyaha Hargeysa iyo dadka iska leh Ceelasha biyaha laga soo dhaamiyo ayaa soo dhaweeyay hubinta iyo baadhista laga bilaabay Ceelashada biyaha ee Aw-barkhadle.
Wasaaradda Isgaadhsiinta Somaliland oo Samaysay Mareegaha Xidhiidhka Xarumaha iyo Laamaha Dawladda